Xukuumadda Somaliland Oo Qoraal Kusoo Bandhigatay Waxqabadkeeda Saddexdii Bilood Ee U Danbeeyay Q. Sadexaad | Araweelo News Network (Archive) -
Published On: Mon, Apr 11th, 2011
Xukuumadda Somaliland Oo Qoraal Kusoo Bandhigatay Waxqabadkeeda Saddexdii Bilood Ee U Danbeeyay Q. Sadexaad
Hargeysa(ANN) Xukuumadda Somaliland ayaa soo bandhigatay qoraal ka kooban afar iyo sodon bog oo ay ku sharaxayso waxqabadkeedii saddexdii bilood ee u danbeeyay, iyadoo qoraalkaa oo saxaafada loo qaybiyay lagu soo bandhigay waxyaabaha ay mudadaa sadexda bilood ah
ka qabatay Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo dhinacyada dhaqaallaha, Caafimaadka waxbarashada, nabadgelyada, tayaynta shaqaalaha, mushahar kordhinata, gurmadkii abaaraha iyo dhaamiska iyo gebi ahaanba adeegyada aasaasiga ah ee arrimaha bulshada.
Qoraaalka oo kasoo baxay madaxtooyada Somaliland, wuxuu isagoo dhamaystiran u qornaa sidan:-
W. Arrimaha Dibada iyo Xidhiidhka Caalamiga ah:
Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah waxa u suuro galay sadexdii bilood ee sanadkan ugu horeeyey wax-qabad kor u qaaday Xidhiidhka ay Somaliland la leedahay Bulshada Caalamka.
Meeqaamka iyo xurmada ay Somaliland ku lahayd aduunka ayaa gaadhay heerkiisii ugu sareeyey sadexdii bilood ee ugu dambeeyey Sanadkan, waxaana sare u kacay wada shaqaynta iyo is-dhexgalka ka dhaxeeya Somaliland iyo Bulshadda Caalamka, taas oo ku soo kordhisay Qadiyada Siyaasadeed iyo Himiladda Shacabka Somaliland ididiilo hor leh.
 Waxaa bishii Koowaad ee sanadkan Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland ka qayb gashay shir-goboleed ay IGAD ku qabatay Adis-ababa oo lagaga hadlay Arimaha mandaqada Geeska Afrika. Waa markii ugu horeeysay ee ay Xukuumad Somaliland ka qayb gasho Shir-goboleed, waxaanay Somaliland madashaasi ka soo jeedisay Qorshayaasha iyo Himilooyinka Qaran ee Somaliland ee dhinacyada Siyaasadda, Dhaqaalaha, Bulshada iyo Nabadgalyada.
 Isla Bishii Koowaad ee Sanadkan, waxaa u suurogashay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Somaliland in ay si dadban aragtideeda siyaasadeed u gudbiso shirwaynihii ururka Midowga Afrika uu ku yeeshay Sanadkan Magaalada Adis-abeba. Somaliland waxay fariinteeda siyaasadeed iyo nabadgalyo ee ku wajahan Geeska Afrika iyo Himiladeeda Siyaasadeedba u marisay shirwaynaha Masuuliyiinta Urur Goboleedka IGAD oo madasha Shirwaynaha ka dhex-akhriyey, arintaas oo uu ka unkamay xidhiidh cusub oo hor leh.
 Bishii Labaad ee Sanadkan waxaa Somaliland Booqasho rasmi ah ku yimid wafti ka socda Urur Goboleedka IGAD oo uu hogaaminayo Xoghayaha guud ee fulinta IGAD. Waxay masuuliyiinta IGAD iyo Wasaaradda Arrimaha Dibedda Somaliland ay ku heshiiyeen nidaam iskaashi oo ay Somaliland iyo Urur Goboleedka IGAD ka yeelan doonaan talo-wadaag, iskaashi, iyo xidhiidh dhexmara labada geesood. Waa markii koowaad ee wafti meeqaamkaa leh oo ka socda Urur Goboleedka IGAD uu ku yimaado Somaliland. Waana markii ugu horeysay ee iskaashi iyo wada-shaqayni dhex marto Dawlada Somaliland iyo Urur Goboleedka IGAD.
 Bishii Labaad ee Sanadkan waxaa Somaliland booqasho hawleed oo rasmi ah ku yimid 17 danjire oo ka kala socda wadamo ka tirsan Yurub, Aasiya iyo Afrika. Dalalka Safiiradan ay ka socdeen waxaa ka mid ahaa wadamada Japan, brazil, Turkiga, Spain, Holland, Belgium, Finland, oo dhamaantood ahayd markii ugu horeysay ee ay wadamadaasi booqasho rasmi ah ku yimaadaan Somaliland. Waxay booqashadani dhalisay xidhiidh ugub ah oo u bilawda Somaliland iyo wadamada ay ka socdeen Danjirayaashaasi.
 Dabayaaqadii Bishii labaad ee Sanadkan waxaa ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland marti-galisay oo booqasho rasmi ah oo shaqo ku yimid wafti sare oo ka socda Dawlada Norway oo uu hogaaminayay Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibada ee Norway oo ay weheliyaan Masuuliyiinkale oo ka socda Dawlada Norway. Booqashada waftigani ay abuurtay xiiso horleh oo ay Qadiyadda Somaliland ka heshay Wadanka Norway, oo ay ugu horayso iskaashiyo la xidhiidha la dagaalanka Budhcad-badeeda, horumarinta caafimaadka, iyo Nabadgalyada.
 Bilawgii Bishii sadexaad ee Sanadkan waxay wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland ku guulaysatay codsi ay u jeedisay in Ingiriisku u soo diro Wafti sare Somaliland, waxaana Dalka booqasho rasmi ah ku yimid Wasiirka Wasaaradda Mucaawinada Dibada iyo Iskaashiga ee Dawladda Ingiriiska. Intii uu wasiirku joogay Somaliland waxaa uu daboolka ka qaaday in ay Dawladiisu ay Sadex-jibaartay Mucaawinadii ay siin jirtay Somaliland oo lagu soo daray Dalalka ay Dawlada Ingiriisku sida rasmiga ah u taageerto, waxaa kale oo uu wasiirku sheegay in ay samayn doonaan Sanduuq Dhaqaale oo ay si wada jir ah Dawlada Ingiriiska iyo Somaliland u wada maamulaan, oo lagu shubo qayb ka mid ah mucaawinada Ingiriiska. Waa masuulkii ugu darajada sareeyey ee abid yimaada Dalka tan iyo intii ay Somaliland xornimada ka qaadatay Boqortooyada Ingiriiska.
 Isla bishii sadexaad ee sanadkan waxaa Somaliland si rasmi ah loogu casuumay oo ay ka qayb gashay shirwayne caalami ah oo ka dhacay Dalka Ingiriiska kana soo qayb galeen wadamo tiradoodu kor u dhaafayso 16 dal, oo lagaga hadlayay nabadgalyo darada ka jirta Geeska Afrika ee ka soo unkamaysa Soomaaliya iyo sidii loo yarayn lahaa Saamaynta ay Nabadgalyo-daradaasi ku leedahay Geeska Afrika iyo Bulshada Caalamkaba. Waftigii ka socday Somaliland wuxuu shirka ka soo jeediyey Khudbad nuxurkeedu taabanayay Aragtida Xukuumadda Somaliland ee ku wajahan wax ka qabashada Xasilooni Darada ka aloosan Mandaqada Geeska Afrika.
 Dhinacakale waxay wasaaradda Arrimaha Dibaddu horaantii sanadkan Ashkato ka dhan ah Shirkadda SARACEN INTERNATIONAL u gudbisay Golaha Amaanka ee Jumciyadda Quruumaha ka dhaxaysa iyada oo la kaashanaysa Xafiiska uu Golahaasi u wakiishay xakamaynta Hubka ee Geeska Afrika. Shirkadda Saracen waxa ay ka bilawday Gobolka Puntland hawlgalo la xidhiidha tababar iyo qalabayn Milatari oo laxaad leh. Waxayna Dawlada Somaliland qabatay Diyaarad Saanad milatari u siday puntland oo ay lahayd Shirkaddani, Wasaaradda Arrimaha Dibada ee Somaliland iyadoo adeegsanaysa Diyaaradaasi iyo saanadii ay siday ayay u yeedhay Khubaro ka tirsan xafiiska xakamaynta Hubka ee Golaha Amaanka. Dhamaadkii bisha sadexaad ee sanadkan wuxuu Golaha Amaanka ee Quruumaha ka dhaxaysaa ku amray Shirkadda Saracen in ay Gabi-ahaanba joojiso hawlgaladii ay ka waday Puntland kana daad-guraysato Hawl-wadeenadeeda. Shirkadda SARACEN INTERNATIONAL waxay cadaysay inay u hogaansantay Go’aankaa ka soo baxay Golaha Amaanka.
 Waxaa kale oo ka mid ah Hawl-galada fulay Wasaaradda in ay dib u soo celisay xidhiidhkii Diplomaasiyadeed ee wadanka Jabuuti, waxaana dib loo furay xafiiska wakiilka Somaliland ee Jabuuti oo hadda si buuxda u shaqeeya. Waxaa kale oo ay Somaliland markii ugu horeysay taariikhda ay xafiis ku yeelatay Dalka Kenya oo isna dhawaan la furay.”